Igolide UPty (Igolide Aputi) [ezikhanyisayo lesikweletu kuphela]
トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Igolide UPty (Igolide Aputi) [ezikhanyisayo lesikweletu kuphela]
Ifomula yomugqa oqondile, ngokuthi yaminyaka yonke isilinganiso
ibhalansi slide uhlelo, uma esilingana noma enkulu kunemicebo izimali ubuncane, ungasetha ngokukhululekile senkokhelo nyangazonke.
10 Man 3 million yen kusuka yen
Igolide UPty (Igolide Aputi) is, ka ezikhanyisayo credit abazinikezele Orico iqembu ikhiphe, kwelinye okuthiwa ikhadi Igolide, Airport ungathola inkonzo yokuzinikela abanikazi ikhadi kuphela Igolide, njll lounge. High Umbuso ubalulekile njengomuntu okuthiwa lokuvelela, kukhona credit okusezingeni eliphezulu kwezilwandle.
Imali yonyaka njengoba ikhadi igolide isethelwe libe lincane, isibe 5000 yen ngonyaka. Njengomthetho ubudala engaphezu kwengu-20 uzinzile futhi kukhona isimo kwemali engenayo. Ihlangene ne-Master Card, itholakala emazweni amaningi phesheya. Uma esilingana noma enkulu kunemicebo izimali ubuncane, ungakwazi ngokukhululekile ukusetha ukubuyiswa kwemali yenyanga. Imali
yonyaka hhayi kuphela isethelwe libe lincane, izinga langempela yonyaka futhi ongaphakeme, isethelwe 10.2%. Lapho usebenzisa i-150,000 yen, i inani lenzalo yonyaka enikezwa 10 isithakazelo 150,000 yen. Kuba 1299 yen siphindwe ezingu-31 ehlukaniswa lemali sanda ngamaphesenti angu-2 izinsuku ezingu-365. Ngenxa lasebhange kuyinto alinganiselwe, isibonelo, futhi uzibekela lemali ukubuyiswa kwemali kuya yen 6,000, uthishanhloko izonikezwa kuyinto 4701 yen lokususa inzalo.
futhi umsebenzi njengoba ikhadi igolide kuyinto enkulu, ngaphezu esikhumulweni sezindiza angasebenzisa lounge yangasese, bekulokhu ohambisana inkonzo imoto umthwalo, ungiphe-amahora angu-24 ngosuku, izinsuku ezingu-365 ngonyaka engozini yemoto noma ukungasebenzi wena. abanikazi Igolide ikhadi amasevisi wemithwalo ukulethwa kanye nezinsizakalo travel futhi kuphela izindiza ngamazwe ziye zaba amasevisi ezivelayo atholakale. Ezifuywayo kwezilwandle ingozi travel yomshuwalense ngisho ezivelayo, ukuze uvale isikhala esiphezulu kwezigidi ezingu-50 yen ngoba le ngozi.
Ngaphezu kwalokho, futhi sifana ukulahleka noma ukweba, eyaqala ngaphambi 60 izinsuku isaziso umonakalo odalwe ukusetshenziswa okungagunyaziwe, futhi umthwalo Orrico kwaba umonakalo okungagunyaziwe ukusetshenziswa. Njengoba amalungu iGolide Orico, kungenzeka ukuthola nokuhlinzekwa kolwazi kanye nezinsizakalo ukujabulela phesheya, ungasebenzisa Honolulu umbhede abanikazi Igolide ikhadi abanamalayisensi Hawaii.
nazo iyahambisana enqolobaneni, ungakwazi ukulondoloza isikhashana at enkulu zenzalo lamalungu Igolide ikhadi kuphela. Ukukhathazeka of imali ungasawusebenzisi ngesikhathi eziphuthumayo. Kungasetshenziswa futhi nemali electronic, okuhambelana iD futhi QUICPay, ingasetshenziswa bethenga, ezifana esitolo lula.
idlula credit card we
jikelele Kunconywa Abavakashi, kungenzeka ukuthola ukunikezwa insizakalo up a notch, abaningi ungqimba elite kanye umkhakha abantu uhambo phesheya ibhizinisi, kuyinto ikhadi ukuthi kufanelekile abaphathi ezinjalo inkampani.
Ngaphezu kwalokho, uma ezisele 5000 yen Imali yonyaka, ngaphezu ungathola full-service, ngoba isithakazelo esithakazelweni futhi ukulondoloza isikhashana e-credit ezijikelezayo elusizo, zonke inkokhelo nsuku zonke ufuna ukuqedela ekhadini Ungasho yini ukuthi ikhadi ephelele kubantu.
ikhadi umndeni Ngoba mina ikhishwe kungekho Imali yonyaka, futhi uye wawuqondisa kubantu abafuna ukusebenzisa ikhadi efanayo nomkhaya. Njengoba cishe bonke ikhadi uhlelo ukusebenza njengoba igolide, kukhona udumo okusezingeni eliphezulu, ungathola isibambo ku notch kwezilwandle.